China Isityalo seCryogenic oksijini sibiza abavelisi bezityalo zeoksijini kunye nabathengisi OKANYE
1: Umgaqo woyilo wale sityalo kukuqinisekisa ukhuseleko, ukonga umbane kunye nokusebenza ngokulula kunye nokugcinwa. Itekhnoloji yindawo ekhokelayo kwihlabathi.
A: Umthengi ufuna uninzi lwemveliso engamanzi, ke sinikezela ngenkqubo yokuphinda usebenzise umoya kwakhona ukuze ugcine ukonga kunye nokusetyenziswa kwamandla.
B: Sisebenzisa kwakhona isiguquli somoya kunye nokuhenda okuphezulu, okuphantsi. Inkqubo yolwandiso ukugcina ukusetyenziswa kwamandla.
2: Yamkela ubuchwepheshe bolawulo lwekhompyuter ye-DCS ukulawula iphaneli ephambili, indawo yangaphakathi ngaxeshanye. Le nkqubo inokujonga yonke inkqubo yesityalo.
Isityalo sokwahlula umoya sisekwe kwiindawo ezahlukeneyo zokubilisa zento nganye esemoyeni. Umoya okokuqala ucinezelwe, upholile, kwaye ususwe i-H2O kunye ne-CO2. Emva kokupholisa kwindawo yokutshintsha kobushushu kude kufikelele kubushushu bokunyibilika, iyalungisa kwikholamu yokufumana ioksijini engamanzi kunye ne-nitrogen engamanzi.
Esi sityalo sisihlunu seemolekyuli sokucoca umoya ngenkqubo yokuhambisa i-turbo.
Emva kokususwa kothuli kunye nokungahlambuluki koomatshini kwisihluzi somoya, umoya okrwada uya kwi-compressor yeinjini yomoya ukucofa umoya kwi-1.1MpaA, kwaye kupholile kude kube li-10 ℃ kwiyunithi yokupholisa umoya ngaphambili. Emva koko ingena kwenye into esetyenzisiweyo yokuntywila isuse i-H2O, CO2, C2H2. Umoya ococekileyo ucinezelwe ngumhambisi kwaye ungena kwibhokisi ebandayo. Umoya wokucinezela unokwahlulwa ube ngamacandelo ama-2. Emva kokuba selehlile kwi-256K, icandelo elinye likhutshelwa ngaphandle kwiyunithi ye-243K, emva koko ipholile ngokuqhubekayo kwindawo yokuhambisa ubushushu ephambili. Umoya opholileyo uza kukhutshelwa ngaphandle, kwaye inxenye yomoya owandisiweyo iya kwindawo yokufudumeza ubushushu ukuze iphinde iqhubeke, emva koko iphume kwibhokisi ebandayo. Kwaye amanye amalungu aya kwikholam ephezulu. Elinye icandelo lipholile ngokuhamba kwekhawuntari, lize liye kwikholamu esezantsi emva kokuba landisiwe.
Emva kokuba umoya ulungisiwe ikakhulu, sinokufumana umoya olulwelo, inkunkuma engamanzi enitrogen kunye nenitrojeni emsulwa engamanzi kwikholamu esezantsi. Umoya olulwelo, initrojeni engamanzi engafunekiyo kunye nenitrojeni emsulwa engafunekiyo emunxwe kwikholamu esezantsi yiya kwikholamu ephezulu emva kokuba ulwelo olupholileyo nolunyulu lwe-nitrogen epholileyo. Emva kokulungiswa kwikholam ephezulu, sinokufumana i-99.6% yokucoceka kweoksijini engaphantsi kwekholamu ephezulu, iyaphuma njengemveliso. Inxalenye yenitrojeni emunxwe ukusuka phezulu kwikholam yokunceda iphuma kwibhokisi ebandayo njengemveliso.
Inkunkuma yenitrojeni emunxwe kumphezulu wekholamu ephezulu iphuma kwibhokisi ebandayo emva kokuba iphinde yavuselelwa yindawo epholileyo kunye neyona ndawo itshisa ubushushu. Inxalenye yayo emuncu, iya kwinkqubo yokuhlanjululwa kwe-molekyuli njengomthombo womoya ohlaziyayo. Abanye bavuliwe.
Egqithileyo Isityalo seCryogenic medium size ulwelo lweoksijini kwisityalo seLitrogen seNitrogen
Okulandelayo: Uhlobo lweCryogenic oluphezulu olusulungekileyo lokucoceka kwenitrogen yomoya ohlukanisa ulwelo kunye nejenjini yeoksijini
Imveliso yeNitrojeni ye-Industria
I-Industria Liquid Nitrogen Generator Izixhobo
Ulwelo lokuvelisa iNitrogen